Otu esi edekọ Ajụjụ ọnụ Podcast na Skype | Martech Zone
Etu esi dekọọ Ajụjụ ọnụ Podcast na Skype
Anyị enweela ugbu a abụọ n'ime usoro nyocha ndị ọkachamara anyị anyị Podcast ma ọ gafeela nke ọma. Anyị nwere Edge nke Web Radio nke bụ ihe ịga nke ọma ma mee na mmekorita ya na ndị mmekọ anyị na Strategics Site. Otú ọ dị, oge ụfọdụ, anyị chọrọ iji mmiri mikpuo onwe anyị ọkachamara mgbe EdgeTalk lekwasịrị anya na a isiokwu.
Na ndị ọkachamara na mba ahụ dum, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịhazi usoro onye ọ bụla iji banye na studio maka ajụjụ ọnụ! Anyị kpebiri ụzọ kachasị mma iji mee nke a bụ ime ka ọ bụrụ akụkụ dị n'akụkụ ma jiri Skype na Garageband wepụ ya niile. Anyị rịọrọ enyemaka nke ọsụ ụzọ Brad Shoemaker site na Creative Zombie slọ nka iwu ulo oru anyi, intros na outro. Brad jiri ọbụna ezigbo enyi m, Jikọọ Ndị Nwụrụ Anwụ, n'okirikiri egwu!
Anyị nwalere ụyọkọ usoro ndekọ oku wee chọpụta n'ezie na ịdekọ oku Skype bụ usoro kachasị mfe. Anyị chọtara Oku edekọ maka Skype si Ecamm a hụrụ na maka a otu oge ego nke $ 29.95! Onye na-edekọ ihe na-apụta ma na-amalite na akpaghị aka site na oku ọ bụla - na-edekọ ma vidiyo ma ọdịyo. Yabụ - ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwekwara ike ịme ajụjụ ọnụ vidiyo n'ụzọ a kwa!
Anyị anwalela ọtụtụ igwe okwu na ntọala kachasị mfe ma kachasị dị irè anyị chọtara bụ naanị iji ya Logitech ClearChat Nkasi obi / USBisi. Ọ dị ka oge ọ bụla m nwere ụda na-apụta site na ndị okwu ngosipụta, ọ na-agbagha ndekọ ahụ ka m wee jiri ekweisi.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịdọrọ ndekọ na Garageband. Naanị m na-adọkpụ faịlụ ahụ na egwu wee chọta ọdịyo niile m chọrọ iwepụ site na kewara egwu ahụ na ihichapụ ụda ndị na-enweghị isi. M na-ebubata ntinye okwu anyị, mgbasa ozi, na outro. M kewara egwu ebe m chọrọ ka mgbasa ozi na-aga na ịdọrọ nke ọ bụla n'ime ụda ọ bụla track kwesịrị ekwesị machie ibe.
N'ihi ọtụtụ ụlọ ndebanye aha anyị wuru na ya BlogTalkRadio, anyị na-akwado ma kwalite Podcast anyị ebe ahụ ma kesaa ya site na iTunes, Stitcher, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. BlogTalkRadio nwere ụlọ nke ya mana ọ bụ ezigbo oge, onye na-edekọ ihe na-enweghị ụzọ iji dozie esemokwu na olu. Anyị emebiela ọtụtụ pọdkastị na-anwa ime ha ndụ!
Lee ihe ndị a:
Ajụjụ ọnụ Drew Burns
Ajụjụ ọnụ Scott Brinker
Otu ihe edetu na nke a - oge ọ bụla ọ dị m ka ọ ga-adị mma na nke a na GarageBand, ha na-agbanwe Interface na ụzọ. Na-akwọ m mkpụrụ!
Nke a dị mma maka ugbu a. Mụ na Brad na-ele anya n'ọdịnihu ebe anyị nwere ike iweta ụfọdụ akụrụngwa na saịtị na ihe omume - Brad nwere ike ịgwakọta ụda ahụ wee hụ ọkwa kwesịrị ekwesị site na ụlọ ọrụ ya. Ọ ga-abụ ntakịrị ego, mana ọ ga - enye anyị obere ụlọ ọrụ anyị nwere ike iji ebe ọ bụla - site na ọfịs anyị ma ọ bụ site na ụlọ nzukọ ọgbakọ. Ọ bụrụhaala na anyị nwere bandwidth, anyị ga-enwe ike ijikọ Podcast ọkachamara.
Tags: brad akpụkpọ ụkwụmmefu egoihe zombie nkanetwọkụ mmekọrịtaebe ndọba ụgbọalaAhịa Podcastgwakọta Podcastajụjụ ọnụ Podcastndekọ Podcastndekọ skypendekọ skypeedekọ skypendekọ skype
Etu ị ga - esi meziwanye Ọdịnaya Mgbasa Ozi Ọdịnaya Gị